शान्ति खोज्दै जाँदा… | Jwala Sandesh
शान्ति खोज्दै जाँदा…
| प्रकाशित मितिः सोमवार, कार्तिक ८, २०७८ ::: 109 पटक पढिएको |
रामहरि अधिकारी- ज्येष्ठ महिनाको १२ गते, दिनको साँढे ४ बजिसकेको थियो। त्यति बेला नेपालको तराईमा चर्को र पहाडमा ठिक्क गर्मी भए पनि माथिल्लो डोल्पाको समुन्द्र सतहबाट करिब ३७०० मिटरको उचाइमा पर्ने साल्दाङ गाउँमा भने ठिक्कको मौसम थियो, जाडो पुरै निख्रेको। गर्मी त त्यहाँ हुने कुरै भएन।
साल्दांगमा रहेको ‘सेल री दुग्द्र’ नामको विद्यालयबाट विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरु भर्खरै घरतिर जाँदै थिए। आज बुद्धपूर्णिमाको दिन भएकोले पढाइ नभए पनि विद्यालयमा विशेष अतिरिक्त कृयाकलापको कार्यक्रम थियो। र त्यस कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुका साथै अभिभावकहरु र गाउँका गन्यमान्यहरुलाई पनि निम्त्याइएको थियो।
बुद्धधर्मका बारेमा खासगरी निंग्मापा सम्प्रदायमा प्रचलित बुद्ध परम्पराका बारेमा विशिष्ट ज्ञान हसिल गरिसकेपछि गुरु टुल्कु रिम्पोचेले ‘प्रबज्या’ अभिषेक (भिक्षु बनाउने समारोह) मा निमेशको नाम भिक्षु ‘संघमित्र’ राखिदिनु भएको थियो।
बाटोमा हिँड्दै गरेको उनी बस्ने घरको कर्मा भाइले ‘सर, के हेरिरहनु भएको?’ भनेर प्रश्न गरेपछि निमेश सर कोठातिर लागे। कोठामा गएर झोला थन्क्याए अनि काश्या (बुद्धमार्गीहरुले लगाउने पहिरन) पहिरेर साल्दांग गुम्बातिर लागे।
‘ओम माने पद्मे हुँ’ को धूनको प्रतिध्वनि सँगै रोल्मो र डुंङचेनको आवाज साल्दांग गुम्बाबाट निस्केर पर निलो आकाश हुँदै परका तिल्जे, मुकोट र ताराप उपत्यकाको धो गाउँ अनि शे-फोक्सुन्डो तालसम्म पुगेर फर्के जस्तो लाग्थ्यो।
‘ओ निमेश तिमी? यहाँ कसरी?’
निमेश अक्क न बक्क पर्यो। तर तुरुन्तै उसले पनि प्रतिक्रिया जनायो, ‘अरे भावना! तिमी? यहाँ कसरी?’
‘तिमी कता बस्छौ? यहीँ बस्छौ होइन? कहीँ जान्नौ नि? पहिले मलाई बस्न भनेर व्यवस्था गरिएको कोठामा गएर सामान थन्क्याउन देऊ अनि कुरा गरौँला। तिमीसित आज रातभर कुरा गर्नुछ।’
पाल्देनले कोठाको चाबी खोल्यो र भित्र लगेर भारी बिसायो। अनि ‘केही चाहिए निमेश सरलाई भन्नु होला म्याडम’ भनेर ब्यंग मिश्रित भावमा खिसिक्क हाँस्दै बाहिर निस्कियो।
उसमा ‘के गरौँ, कसो गरौँ’ भने झैँ अन्मयष्क भाव देखियो।
‘भित्र आउन्नौ? बाहिर त चिसो छ त?’ भन्दै भावना झोला खोतलखातल गर्न लागि।
‘तिमी फ्रेश भएर निस्क, अनि सँगै खाना खाँदै कुरा गरौँला। तेतिन्जेल म बाहिरै पर्खिरहन्छु’ निमेशले भन्यो र ढोका बाहिरको बेन्चमा बस्यो।
केहीछिनपछि फ्रेस भएर भावना बाहिर निस्की। निमेश त्यतिन्जेलसम्म आकाशको पूर्ण चन्द्रतिर नियाल्दै ‘ओम माने पद्मे हुँ’ को मन्त्र गुनगुनाइरहेको थियो।
‘तपाईंहरुसित आउनु भएको मिस हाम्रो निमेश सरको साथी हुनुहुनुहुँदो रहेछ क्यारे। उहाँहरु आउँदै गर्नु हुन्छ होला तपाईंहरु खाना खाँदै गर्नुहोस्’ पाल्देनले भनेपछि भावनाका स्वदेशी र विदेशी दुवै खालका साथीहरु खाना खान थालेका रहेछन्।
भावनाले सबैसित निमेशको परिचय गराई ‘ऊ मेरो ५ कक्षा पढ्दा देखिको मेरो जीवन पर्यन्त सबैभन्दा नजिकको साथी, अहिले यो हिमालमा आएर भिक्षु भएछ। म आज उसलाई १३ वर्षपछि भेट्दैछु।’
नेपालीहरुले निमेशलाई नमस्ते गरे भने विदेशीहरुले ‘हाई’ गरेर अभिवादन गरे।
‘सर-मिस, खाना छिटो खानुस्, सेलाइसक्यो’ पाल्देनले दुवैजनाको कपमा थर्मसबाट नुन र घ्यूको चिया खन्याउँदै मायालु पारामा हकारेपछि दुवैजना झसंग भए।
‘भावना, तिमी भोकाएकी छौ, छिटो खाना खाऊ’ निमेशले भन्यो र आफूले पनि खान थाल्यो।
‘खै निमेश, आज नसोचेको अवस्थामा तिमीलई देखेपछि त मेरो भोक कता हरायो कता’ बडा जबर्जस्त तरिकाले हाँस्न खोजे झैँ गरी भावना।
भावनाले आकाशतिर शून्यभावमा हेरेर भनि, ‘निमेश, साँच्चीकै स्वर्ग भनेको यही आकाश होला है? मैले त यसरी खुला आकाश देख्न नपाएको पनि कैयौँ वर्ष भैसकेछ।’
‘ठिक छ भावना, बताऊ तिम्रो जीवन कहानी, तिमी कसरी कहाँबाट यहाँ आइपुग्यौ?’
‘म सुख खोज्न जाँदा दुःखको सागरमा डुबेकी मान्छे, मेरो के कथा हुनु। मलाई बितेका कुरा फर्केर सम्झिने समेत चाहना छैन। बरु तिमी यो हिमालको फेदीमा के गर्दै छौ, त्यो बताऊ।’
‘मैले विदेश नजाऊ भावना, यही बसेर पढौँ, यहीँ कर्म गरेर हाम्रो सपना साकार पारौँ’ भन्दाभन्दै मसँगै अमृत क्याम्पसको बिएस्सी भर्ना भएकी तिमी आर्किटेक्ट ईन्जिनियरिङ पढ्न भनेर अमेरिका गयौँ। तिमीलाई थाहै छ, मलाई पढ्नकै लागि भनेर देश छोडेर जान मन लागेन।
सायद दैवलाई हाम्रो सम्बन्ध मन्जुर थिएन, तिम्रा चिठीपत्रहरु पातलिन लागे। मसँग तिम्रो कुराकानी कम हुँदै गयो। मेरा चिठीहरुको जवाफ आउन कठीन हुँदै गयो। र करिब एक वर्षपछि त तिमीसितको सम्पर्क पुरै टुट्यो। केही समयपछि अपुष्ट समाचार आयो, ‘तिमीले उतैको गोरासित बिहे गर्यो रे।’ मेरो भाग्यमा आगो लागेको थियो।
‘फेरि कसरी यहाँ आइपुग्यौ? कृपया मलाई सबै कुरा बताऊ’ भावनाले निमेशको अनुहारमा हेर्दै सोधी।
यही साल्दाङ गुम्बामा आएर ‘ओम माने पद्मे हुँ’ को मन्त्र सितै रोल्मो र डुंचेनको धुन सुनेपछि मलाई भित्र मनमा एक किसिमको उर्जा उत्पन्न भयो। यहाँका रिम्पोचे गुरुको आशिर्वचन सुनेपछि लाग्यो, मेरो जीवनको गन्तव्य यही हो। अनि म मसित आएका साथीहरुलाई छोडेर यतै बसेँ। त्यसपछि गुरुसित दिक्षा लिएर बुद्दिष्ट बनेँ।
निमेशको व्यंगमिश्रित भनाइ सुनेपछि भावनाले जवाफ दिई, ‘म हतप्रभ भएकी छु तिम्रो व्यंगभावयुक्त भनाइ सुनेर। मेरो जीवन तिमीले सोचेजस्तो सुखी रहेन र म अरुले देखेजस्तो खुसी पनि छैन। तिमी मेरो जीवनको मणि थियौ र मैले त्यो गुमाएँ। पूर्णिमाको रातमा जुन हरायो भने के हुन्छ भन त? मेरो जीवन त्यस्तै भएको छ, कालो औँसीको रातजस्तै भएको छ।
औँसीको रात र मेरो जीवनमा एउटै फरक छ, औँसीको रातपछि केही दिनमा जुनेली रात सुरु हुन थाल्छ र १५ दिनमा चन्द्रमा पनि पूर्ण हुन्छ तर मेरो जिन्दगीमा सधैँ काला रातहरुले मात्र राज गरिरहेका छन्।’
‘किन र भावु, के भयो त्यस्तो अनपेक्षित घटना जसले गर्दा तिमी आफ्नो जीवनलाई कालरात्रीसित तुलना गर्दै छौ?’
‘सुन, म पनि तिमीलाई सुनाउँछु मेरो कहानी-
‘यो कुरा अहिले आवश्यक छैन’ भनेर उसले टार्यो।
पश्चिमा मुलुकमा अविवाहित जोडीले पनि सन्तान पाउन सक्ने प्रचलन छ। त्यसैले मैले ‘अब त हामीले पनि सन्तान पाउनु पर्छ’ भनेर जिद्धी गरेँ। तर कार्लोसले ‘सन्तान जन्मायो भने तिमी चाँडै बुढी देखिन्छ्यौ र हामी जवानीको उपभोग गर्न बन्चित हुन्छौँ’ भनेर सन्तानोत्पादनको मेरो चाहनालाई अस्वीकार गरिरह्यो।
उसलाई ‘विभिन्न केटीहरु फेरी-फेरी बार र क्लबहरुमा गएको देखेको भनेर मान्छेहरुले भन्न थाले। ‘तपाईंको ज्वाईं, छोरा वा दाजू या भाइलाई वा देबर, जेठाजुलाई सम्झाइदिनुहोस् न’ भनेर अनुरोध गर्न त्यहाँ मेरा कोही माइती, सासू, ससुरा, नन्द, आमाजू वा जेठानी थिएनन्।
‘मेरो श्रीमानलाई सम्झाइदेऊ’ भन्न कोही छिमेकी थिएनन्। मेरो कुरा सुन्न मेरो बोइफ्रेन्डलाई कुनै जरुरत थिएन, किनभने ऊ मेरो श्रीमान् थिएन।
त्यसपछि म शान्तिको खोजिमा सारा संसार डुल्दै अहिले आफ्नै मातृभूमि आइपुगेको छु। र सायद परमेश्वरले मेरो मानको कुरा बुझेर होला, पदयात्राको क्रममा तिमी भएकै ठाउँमा आइपुगेकी छु।’
गाउँमाथि रहेको साल्दांग गुम्बाहरुबाट एकनासले ‘ओम माने पद्मे हुँ’ को धुन आइरहेको थियो।
यस्तैमा ‘टाँसिदेलेक’ भन्दै पाल्देन र होटेलकी साहुनी कार्माले नुन र घ्यू हालेर मथेको चिया र फापरको रोटी ल्याइदिए।
उसले निमेशको दुवै हात च्याप्प समातेर भनी, ‘निमेश, मैले खोजेको शान्ति यहीँ पाएँ। म पनि यही बस्छु ल तिमीसितै। जीवनभर, मृत्यु पर्यन्तसम्म। हुन्छ?’
‘ओम माने पद्मे हुँ।’ सेतोपाटीबाट